Magirazi Magirazi, Magirazi Jira, Optical Mafaira - Co-Ona
TIRI MUMABHUKU, saka HAUFANIRI KUVA
Wuxi CO-Ona Kurongedza ndeimwe yevanotungamira vagadziri vemagirazi, magirazi kesi uye magirazi zvishongedzo muiyo Optical indasitiri. Iine anopfuura makore gumi echiitiko, Co-Ona inopa yakasarudzika sevhisi, yemhando yepamusoro chigadzirwa uye yemakwikwi mitengo uye zvakare inopa dhizaini kugona kugadzira makesi akagadzirwa uye zvishongedzo. Tichishandisa tekinoroji yepamberi, isu tinoita kuenderera uye kwakasimba kweanodzora emhando yezvigadzirwa zvedu mukati meyese nzira yekugadzira, tichinyatso kuziva chokwadi chekuti kambani yedu inoshanda muOEM uye zvigadzirwa zvedu zvinogamuchirwa musika kumba nekune dzimwe nyika. Yakabatana nekambani yedu, tichaona nyika yakajeka!
Yakabatana nekambani yedu, tichaona nyika yakajeka!
Wuxi CO-Ona Kurongedza ndeimwe yevanotungamira vagadziri vemagirazi, magirazi kesi uye magirazi zvishongedzo muiyo Optical indasitiri.
Glasstec VIRTUAL kubva musi wa20 kusvika 22 Gumiguru yakabudirira kuvhara musiyano uripo pakati pazvino uye iri kuuya glasstec munaJune 2021. Iine zano rayo rinosanganisira dhijitari ruzivo rwekuchinjisa, inoverengeka mharidzo mikana yevaratidziri pamwe nekuwedzera mikana yekutengesa, yakagutsikana ...
LOFT EYEWEAR RATIDZA
LOFT Eyewear Shows ndiyo yekutanga yakazvimirira yakasarudzika eyewear zviitiko zvinoitwa gore rega rega muNew York City, Las Vegas uye ikozvino San Francisco. Kubva 2000, iyo LOFT zviitiko zvakaratidza zvakanyanyisa kusarudzika uye kucheka kumucheto vagadziri vanobva kutenderera pasirese. Isu tiri boka rakafanana-pfungwa, yakazvimirira dhizaina
China Europe International Trade Digital Exhibition, iyo yaitsigirwa neChina CCPIT, China Chamber yeInternational Commerce neChina Service Trade Association zvakabatana pamwe chete, yakaitirwa muBeijing muna Gumiguru 28 gore rino. Ichi chiratidzo ndechekurangarira kusvika pagore rechi45 reSino-European diplo ...